Dublamaasiyiintii USA ee Liibiya oo isku biimeeyey saxaraha si ay u gaaraan Tunisia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dublamaasiyiinta Mareykanka ee ku sugnaa dalka Liibiya ayaa safar qar iska tuurnimo ah uga baxay dalkaas, iyagoo gaaray dalka deriska ah ee Tunisia.
Kolonyada dublamaasiyiinta Mareykanka ayaa dalkaas ka baxay kadib markii muddo 3 todobaad ah ay magaalada Tripoli ku dagaallamayeen maleeshiyaad reer Liibiya, kuwaasoo isku haya maamulka dalka.
Iyadoo ay cirka ka ilaalinayaan diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee F-16 iyo diyaaradaha kale ee aan duuliyaha laheyn ayaa dublamaasiyiinta Mareykanku dhex jeexeen saxaraha u dhaxeeya dalalka Liibiya Tunisia.
Sidoo kale, waxaa dadkaan Mareykanka ah kor ka ilaalinayey markab dagaal oo ah nuuca wax burbriya, kaasoo taagnaa meel ka mid ah badda Mediterranean-ka.
Shaqaalaha Mareykanka ah ee laga qaaday dalka Liibiya ayaa waxey gaarayaan ilaa 50 ruux oo kala ah safriirka Mareykanka u fadhiya dalkaas, Ambassador Deborah Jones iyo 149 shaqaale ah oo u badan ciidamada mariiniska dalkaas.
Markii shaqaalaha Mareykanka ah si nabad ah ku gaareen xadka Liibiya la wadaagto Tunisia ayaa afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhiga Mareykanka ee Pentagon, Admiral John Kirby sheegay in shaqaalahaasi soo mareen safar qaatay 5 saacadood oo si nabad ah ku dhamaaday.
Xoghayaha arrimaha debadda Mareykanka, John Kerry ayaa warbaahinta aduunka u sheegay in dublamaasiyiinta Mareykanka si nabad ah looga saaray dalka Liibiya, lana geeyey dalka Tunisia.
John Kerry ayaa sheegay in xaaladda amaan ee dalka Liibiya ay tahay mid aan u xun, islamarkaana safaaradda Mareykanka dib loo furi doono hadii xaaladda amaan soo hagaagto.
Sababta Mareykanku shaqaalihiisa dhulka u mariyey ayaa ah iyadoo garoonka diyaaradaha magaalada Tripoli ay dagaallo ka socdaan oo weliba ay halkaas ku gubteen diyaarado fara badan.
Maryekanka ayaa sanadkii 2012 waxaa magaalada dhanka bari ee Liibiya ku taalla looga dilay safiirkii halkaas u fadhiyey kadib markii koox hubeysan safaaradda weerareen oo dab qabadsiiyeen.
Dalka Liibiya ayaa fowdo weyn galay kadib markii kacdoon hubeysan sanadkii 2011 lagu riday hogaamiyihii dalkaas Col. Mucamar Al-qadaafi.
Garaash uu lahaa hogaamiye kooxeed hore oo laga helay hub farabadan (Waa Kuma?)